Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 37
Amin'ny efatra ka hatramin'ny antsasaky ny boribory eo amin'ny vato mason'ny Royal Arch Chapter dia ireo taratasy HTWSSTKS Manana fifandraisana amin'ny Zodiac izy ireo, ary inona no asehon'ireo toerana manodidina ny faribolana?
Ireo taratasy H. T. W. S. S. T. K. S. vakina avy eo ankavia miankavia, fa tsy maintsy mihodina avy ao ankavia miankavia. Fantatsika ny zodiaka, ny taratasy voalohany H. dia eo amin'ny toerana aries, T. voalohany tao amin'ny aquarius, W. tamin'ny capricorn, S voalohany. ao amin'ny scorpio, S faharoa. tao amin'ny libra, ny faharoa T. tao leo, K. amin'ny homamiadana, ary fahatelo fahatelo S. amin'ny taurus. Ny litera dia mety ho hita ao amin'ny boky Masonic, fa ny teny izay mijoro ireo taratasy ireo, na ny dikany dia tsy omena amin'ny boky rehetra. Tsy maintsy heverina ho miafina ary manan-danja tokoa ny dikany ary tsy natao ho an'ny fampianarana sy ny taratra ireo izay tsy nahazo ny ambaratonga Royal Arch Chapter. Tsy mpikambana ao amin'ny Masonic Fraternity ny mpanoratra dia tsy nahazo toromarika avy amin'izany Fraternity momba an'i Masonry, ary tsy mody fahalalana na inona na inona ny tsiambaratelon'ny asa tanana Masonic. Ny simbolisme kosa dia fiteny iraisan'ny rehetra. Na iza na iza mahatakatra azy dia tokony hamaky ny dikan'ilay vato fehizoro amin'ny alàlan'i Masonry, izay ampidirina ao amin'ny zodiak, ary hazavaina amin'ny alàlan'ny fahazavana izay omen'ny zodiaka, ary arakaraka ny haavon'ny nananganany azy. Ireo famantarana efatra amin'ny zodiaka, gemini, virgo, sagittary ary pisces, dia esorina satria tsy ilaina amin'ny asa, fa raha tsy izany dia tafiditra ao amin'ny famantarana, taurus, leo, scorpio ary aquarius. Taurus, leo scorpio sy aquarius dia voamariky ny litera S. T., S. T., izay napetraka eo afovoany eo anelanelan'ny marika, homamiadana, libra ary capricorn. Raha mifanisy marika ny litera na litera mifanohitra amin'ny andalana dia hisy hazo fijaliana roa. Ny hazo fijaliana napetraky ny tsipika mitsangana H. S. ary ny tsipika marindrano K. W. dia ny lakroa tsy tapaka amin'ny zodiaka, aries-libra ary cancer-capricorn. Ny lakroa noforonin'ny tsipika S. S. ary T. T. dia lakroa afindra mihetsika ny zodiaka, namboarin'ny famantarana ny taurus-scorpio sy leo-aquarius. Ireo famantarana sy hazo fijaliana ireo dia mampiavaka ireo biby masina efatra: ny omby na omby, taurus, nomarihin'ny litera S .; ny liona, leo, izay ilay taratasy T .; ny voromahery na scorpio, eo amin'ny toerana misy ny litera S .; ilay lehilahy (anjely indraindray) na Aquarius, ho solon'io ny taratasy T Fijerena ny fifandraisana sy ny toeran'ny litera sy famantarana ireo lakroa roa ireo: Ny litera H. ary ny mifanohitra amin'izany an'i S. dia maneho ny lohan'ny vato fehizoro ary ny faladiany, ary mifanandrify amin'ny aries sy libra. Ny litera K. ary W maneho ny lafiny roa amin'ny vato fehizoro, izay mifanitsy amin'ny famantarana ny homamiadana-capricorn. Ity no fiampitana mijanona eo amin'ny zodiaka. Ny litera ambony S. ary ny litera ambany S. maneho ny zorony ambony sy ny zorony ambany ambany amin'ny vato fehizoro ary mifanitsy amin'ny famantarana famantarana taurus-scorpio ny zodiak. Ny litera ambony T. ary ny litera ambany T. mifanandrify amin'ny zorony ambony hafa sy ny zorony ambany ambany amin'ny vato fehizoro, ary amin'ireo famantarana famantarana aquarius-leo ny zodiak, izay mamorona lakroa amin'ny zodiak. Ireo taratasy ireo ny vato ifaharan'ny vato, na ny famantarana ny zodiaka, dia mety ho ampiasaina tsiroaroa amin'ny fomba maro. Ho tsikaritr'ireo ny litera ny lohany sy ny base ary ny sisin'ny vato fehizoro ary samy mifanohitra ny litera (S. S. ary T. T.) amin'ireo zorony izay mifanitsy amin'ny hazo afakelin'ny zodiak, mitovy endrika amin'ny biby efatra voalaza etsy ambony, dia mitovy. Raha ny litatry ny vato fehizoro sy ny toerany ary ny famantarana ny zodiak dia natao fotsiny hanadino ny saina sy ny olona tsy manam-pahalalana, dia tsy misy ilana azy ary tokony hariana. Saingy raha ny marina izy ireo dia manana dikany lalina sy manome lanja ara-batana sy ara-panahy.
Ny zodiaka dia maneho ny olombelona eo amin'izao rehetra izao ary izao rehetra izao ao amin'ny olombelona; ny vato fehizoro dia solontenan'ny olombelona. Ny fanazavana ny toerana misy ny olona apetraka eto amin'izao tontolo izao sy ny fambolena ny toetra tsara izay ahatongavany ireo zava-dratsy izay mampijaly azy, alohan'ny hiakarany ho any amin'ny satroboninahitra sy ny voninahitry ny fiainany, dia lava loatra amin'ny fanandramana. Ny drafitra fohifohy fohy ihany no omena eto. Rehefa napetraka ao amin'ny tontolo ara-batana ao amin'ny zodiac ny olombelona ara-batana, dia toy izany koa ny olombelona tahaka ny fanahy apetraka ao amin'ny olombelona amin'ny vatana, ny vatany. Amin'ny maha lehilahy teraka ny vehivavy dia tokony hipoitra avy amin'ny toetrany ambany ara-batana, miasa amin'ny alàlan'ny biby maha-biby ary hiakatra ho amin'ny voninahitry ny maha-olona ara-tsaina ao amin'izao tontolo izao, koa ny olombelona tahaka ny fanahy dia tsy maintsy mandresy sy hiakatra avy amin'ny toetran'ny biby maha-olombelona azy. mitsangàna ary tanteroo ilay lehilahy manana saina toy ny satroboninahiny sy voninahiny. Tahaka an'i Ixion ao amin'ny angano an'ny Grika, dia nofatorana sy nivadika teo amin'ny hazo fijaliana iray, hanonitra ny hadisoany, dia toy izany koa no napetraka an'izao tontolo izao mba hamolavola ny tanjony; ary, toy izany koa ny olombelona tahaka ny fanahy napetraka ao amin'ny vatany izay mizaka ny fitsapana ny toetra maha-olona azy, ny hampijaliana azy mandra-pandresany azy, ny biby biby, ary handalo ary hodiovina amin'ny karazana fitsapana rehetra ary ny fitsapana, mba ho vonona izy ary hanaporofo fa mendrika ny hameno ny toerany tsara eo amin'izao rehetra izao. Ny mariky ny zodiaka dia mampiseho ny ambaratonga sy ny lalàna izay asan'ny lehilahy ara-batana sy ara-tsaina sy ara-tsaina sy ara-panahy ary ara-panahy amin'ny zodiak'izy ireo tsirairay avy, ao anatin'ny zodiaka rehetra. Ny taratasy eo amin'ny vato fehizoro dia tokony hampiseho ny fomba sy ny fiasan'ny olona ho fanahy ao anaty vatana ara-batana ao amin'ny zodiakony napetrany, mba ho tonga tena vato fehizoro izay mameno ny arisin'ny mpanjaka izy. Ny asan'ny Royal Arch Chapter dia mety hanome ny tandindon'ny taratasy sy ny vato ifaharan'ny vato; saingy tsy afaka ny ho tandindona fotsiny izany. Ny olona amin'ny maha fanahy dia mety hanorina ny ariny, nefa tsy mahavita izany - tsy tena mameno azy amin'ny fiainana iray. Resy izy; Novonoin'ny fahavalony izy. Matetika izy rehefa maty dia atsangana ary miverina indray, ary hanohy ny asany mandra-pitsanganany ary hameno ny toerany ary hamita ny ariny ao amin'ny tempoly. Ho vita ny faribolana amin'ny fiainany, ilay arko. Dia hiala izy tsy hisy intsony.
Ny vato ifaharan'ny mason'i Mason izay naka ny Royal Arch Chapter dia tandindon'ny tenany rehefa mendrika izy ary vonona hamita sy hameno ny arin'ny fiainany — ao amin'ilay tempoly tsy namboarin-tanana. Ny olombelona ho Mason, ilay vato ifaharan'ny tempoly, dia eo amin'ny faritra ambany ambany indrindra amin'ny firafitra. Izy io, dia eo amin'ny toerana fanaovana firaisana, libra, ny zodiakony. Tsy maintsy hitsangana izy, tsy maintsy manangana ny tenany. Rehefa avy naka ny toeran'ny litera tamin'ny vato fehizoro, na amin'ny famantarana ny zodiak, ary manao ny asa notakian'ny taratasy na famantarana tsirairay, dia tsy maintsy miakatra amin'ny alalany sy miasa any amin'ny lohany izy - izany no satroboninahitra sy voninahitra an'ny olombelona. Rehefa atsangana avy amin'ny toerana fanaovana firaisana mankany an-doha ilay vato dia ho lasa tsy mety maty izy, ny olona, ​​ilay vato lehibe. Izy avy eo dia izay rehetra voalaza momba ilay vato fotsy izay anarana vaovao, anarana vaovao, izay nataony ho marika eo amin'ilay vato, ilay vato maha-tsy mety maty.